12 E wee hụ oké ihe ịrịba ama+ n’eluigwe, ya bụ, otu nwaanyị+ nke yi anyanwụ dị ka uwe, ọnwa dịkwa n’okpuru ụkwụ ya, o kpukwa okpueze nke bụ́ kpakpando iri na abụọ n’isi ya. 2 Nwaanyị ahụ dị ime. O wee na-eti mkpu n’ihi ihe mgbu+ ọ na-enwe na oké ihe ụfụ ọ na-enwe ịmụpụta nwa. 3 E wee hụ ihe ịrịba ama ọzọ n’eluigwe, ma, lee! dragọn ukwu nke na-acha uhie uhie,+ nke nwere isi asaa na mpi iri, o kpukwa okpueze asaa n’isi ya; 4 ọdụ ya+ na-adọkpụrụkwa otu ụzọ n’ụzọ atọ nke kpakpando+ ndị dị n’eluigwe, ọ tụdakwara ha n’ụwa.+ Dragọn ahụ guzokwa n’ihu nwaanyị ahụ+ nke na-aga ịmụ nwa,+ ka o wee ripịa+ nwa ya mgbe ọ mụrụ ya. 5 O wee mụọ ọkpara,+ bụ́ nwa nwoke, onye ga-eji mkpanaka ígwè+ zụọ mba niile dị ka atụrụ. E kukwaara nwa ya gaa n’ebe Chineke nọ nakwa n’ebe ocheeze ya dị.+ 6 Nwaanyị ahụ wee gbaga n’ala ịkpa,+ bụ́ ebe o nwere ebe Chineke kwadebere, ka ha wee na-enye ya nri+ n’ebe ahụ ruo otu puku ụbọchị na narị ụbọchị abụọ na iri isii.+ 7 Agha wee daa n’eluigwe: Maịkel+ na ndị mmụọ ozi ya busoro dragọn ahụ agha, dragọn ahụ na ndị mmụọ ozi ya bukwara agha 8 ma dragọn ahụ emerighị, ohere adịghịrị ha ọzọ n’eluigwe. 9 E wee chụda dragọn ukwu ahụ,+ bụ́ agwọ mbụ ahụ,+ onye a na-akpọ Ekwensu+ na Setan,+ onye na-eduhie elu ụwa dum mmadụ bi;+ a chụdara ya n’ụwa,+ a chụdara ya na ndị mmụọ ozi ya. 10 M wee nụ oké olu nke si n’eluigwe sị: “Nzọpụta+ na ike+ na alaeze nke Chineke+ anyị na ikike nke Kraịst+ ya amalitewo ugbu a, n’ihi na a chụdawo onye ahụ nke na-ebo ụmụnna anyị ebubo, onye na-ebo ha ebubo n’ihu Chineke+ anyị ehihie na abalị! 11 Ha merikwara ya+ n’ihi ọbara Nwa Atụrụ ahụ,+ na n’ihi okwu ha gbara àmà ya,+ ha ahụghịkwa mkpụrụ obi ha+ n’anya ọbụna n’ihu ọnwụ. 12 N’ihi nke a, ṅụrịanụ ọṅụ, gị eluigwe na unu ndị bi n’ime ya!+ Ahụhụ+ ga-adịrị ụwa na oké osimiri,+ n’ihi na Ekwensu agbadatawo n’ebe unu nọ, ọ na-ewe oké iwe, ebe ọ maara na o nwere oge dị mkpirikpi.”+ 13 Mgbe dragọn ahụ hụrụ na a chụdara ya n’ụwa,+ ọ kpagburu nwaanyị ahụ+ nke mụrụ nwa nwoke. 14 Ma e nyere nwaanyị ahụ nku abụọ nke nnukwu ugo,+ ka o wee fega n’ala ịkpa,+ bụ́ ebe a kwadebeere ya; n’ebe ahụ ka e nyere ya nri+ ruo otu oge na oge abụọ na ọkara otu oge+ n’ebe agwọ ahụ na-anọghị.+ 15 Agwọ ahụ wee gbụpụta mmiri+ yiri osimiri n’ọnụ ya n’azụ nwaanyị ahụ, ka o wee mee ka osimiri ahụ rie ya.+ 16 Ma ala bịara nyere nwaanyị ahụ aka,+ ala wee meghee ọnụ ya ma loo osimiri ahụ nke dragọn ahụ gbụpụtara n’ọnụ ya. 17 Dragọn ahụ wee weso nwaanyị ahụ iwe,+ gaakwa ibuso ndị fọdụrụ n’ime mkpụrụ ya agha, bụ́ ndị na-edebe ihe Chineke nyere n’iwu, ndị nwekwara ọrụ ịgba àmà+ banyere Jizọs.